ကြွက်များတွင်ကြာရှည်စွာကိုကင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအပြီးပြောင်းလဲထားသော Fronto-Cortical နှင့် Striatal လုပ်ဆောင်မှု၏သက်သေပြမှု (Neurimaging)
အဆိုပါ Rat (2011) တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် ALTER နံရံပစ်ကစားနည်း-cortical နှင့် Striatal ရာထူးအမည်များ၏အထောက်အထား Neuroimaging
Neuropsychopharmacology ။ 2011 နိုဝင်ဘာ; 36 (12): 2431-2440 ။
2011 ဇူလိုင် 20 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1038 / npp.2011.129
Alessandro Gozzi,1,2,* Michela Tessari,2 Lisa ကို Dacome,2 Federica Agosta,2 စတီဖာနို Lepore,2 အန္န Lanzoni,2 Patrizia ခရစ္စတိုဖာရီ,3 Emilio M က Pich,2 Mauro Corsi,2 နှင့် အန်ဂျလို Bifone1,2
ကိုကင်းစွဲမကြာခဏကြွက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူး (SA) ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးလေ့လာသင်ယူရှိရာစမ်းသပ် Paradigm အတွက်လုပ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤမော်ဒယ်များကိုကင်းစွဲ၏လက်တွေ့ neuroimaging လေ့လာမှုများအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာလုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြောင်းလဲမသိသောဖြစ်နေဆဲပုံတူပွားသောအတိုင်းအတာ။ ကျနော်တို့ Basal အကဲဖြတ်ရန်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (MRI) ကိုအသုံးပြုပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာ, တိုးချဲ့-access ကိုကိုကင်းလုပ် SA အစီအစဉ်အကြောင်းမဲ့ကြွက်များတွင်ဦးနှောက် function ကို evoked ။ အထူးသကျနော်တို့ Basal နှောက်အသှေးကိုအသံအတိုးအကျယ် (bCBV), Basal ဇီဝြဖစ်တစ်ခုထူထောင် Correlate တိုင်းတာလျက်, dopamine-release စိတ်ကြွဆေးများက evoked အဆိုပါ pharmacological MRI (phMRI) တုန့်ပြန်ပုံဖော်အားဖြင့် dopaminergic စနစ်၏ reactivity ကိုအကဲဖြတ်။ ကိုကင်း-ထိတွေ့ဘာသာရပ်များနံရံပစ်ကစားနည်း-cortical ဒေသများ, နျူကလိယ accumbens, ventral hippocampus နှင့် thalamus အတွက် bCBV လျှော့ချပြ။ အဆိုပါကင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုလည်း ventrostriatal ဒေသများရှိစိတ်ကြွဆေးတစ်ခု attenuation အလုပ်လုပ်တဲ့တုံ့ပြန်မှု, သိသိသာသာစုစုပေါင်းကင်းစားသုံးမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းခံခဲ့ရသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါ reticular thalamus အတွက် bCBV အကြားတစ်ဦးပြောင်းပြန်ကြားဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ကြွဆေးများကရူးနှမ်းဟာတိုကျရိုကျတုံ့ပြန်မှုကဒီအာရုံကိုဆားကစ်အတွင်း inhibitory ဆက်စပ်မှုတွေမူးယစ်ဆေးများကခိုးယူစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များအတွက်ဒါပေမဲ့မကင်းအုပ်စုတွင်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ အရေးကြီးတာက, histopathological ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအဆိုပါပုံရိပ်တွေ့ရှိချက်မျှသာကင်း-သွေးဆောင်သွေးကြောပျက်စီးမှုကိုမှ ascribed မရနိုင်ကြောင်းအကြံပြု, ကိုကင်း-ထိတွေ့ဘာသာရပ်များ၏ဦးနှောက်ထဲတွင် microvascular အိပ်ရာ၏သိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲထုတ်ဖေါ်ခဲ့ပါဘူး။ ကြွက်များတွင်ဤရလဒ်များကိုစာရွက်စာတမ်းကြောင့်နာတာရှည်, တိုးချဲ့-access ကိုကိုကင်းလုပ် SA ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက် compulsive မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏အမူအကျင့်စကားရပ်သည်ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည် neurobiological အလွှာဟာအစေခံကြောင်း focal နံရံပစ်ကစားနည်း-cortical နှင့် striatal ကိုပြောင်းလဲထုတ်လုပ်သည်။
keywords: ကိုကင်း, fMRI, phMRI, dopamine, စွဲလမ်း, ကြွက်
နာတာရှည်ကင်းအသုံးပြုမှုကိုကင်းမှီခို (သတ်မှတ်ပါတယ်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့၏ဆုံးရှုံးမှုကိုအခြေခံမှထင်ကြသည်ကြာရှည် neurobiological အပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်Koob et al, 1998) ။ လူ့ neuroimaging လေ့လာမှုများကဤပြောင်းလဲမှုသဘာဝနှင့်တိကျသောအပြုအမူသို့မဟုတ်ရောဂါလက္ခဏာနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဆကျဆံရေးအပျေါအလငျးဖွာဖို့စတင်ခဲ့ပါပြီ။ abstinent ကင်းချိုးဖောက်လျှော့ချ frontostriatal perfusion နှင့်ဇီဝြဖစ် (မျိုးစုံကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေဖြင့်သတင်းပေးပို့ခဲ့ကြStrickland et al, 1993; လန်ဒန် et al, 1999; Volkow et al, 1992) ။ တိုကျရိုကျတိုင်းဒေသကြီးများ၏နှောင့်အယှက် function ကိုဇွဲ neuropsychological လိုငွေပြမှုနှင့်မကြာခဏ relapse (ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းကြောင့်မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေကျော်ချို့ယွင်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်Strickland et al, 1993; Kalivas, 2004) ။ ရွေးချယ် D နဲ့ Positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) လေ့လာမှုများ2 dopamine (DA) ligands: D ထဲမှာကိုကင်းစွဲပြပွဲမြဲလျော့ချရေးနဲ့ဘာသာရပ်များသရုပ်ပြပါပြီ2 DA အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (Volkow et al, 1993; Martinez et al, 2004) နှင့်နျူကလိယ accumbens နှင့် '' ဆုလာဘ် circuit ကို '' ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများအတွက် dopaminergic တုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းသွားသည် (Volkow et al, 1997(ဤဘာသာရပ်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသဘာဝကစစ်ကူရန်လျော့နည်းသွား sensitivity ကိုနှင့်အတူ), တသမတ်တည်းVolkow et al, 2007) ။ မကြာမီကသုတေသနစွဲလမ်းပြည်နယ်များ (နဲ့အတူဆက်စပ် neuroadaptational ဖြစ်စဉ်များအဘို့ဝတ္ထုလမ်းကြောင်းပုံနဲ့သရုပ်ဖော်ထားပါတယ်တဲ့တွေ့ရှိချက်, catecholamines ဆားကစ်၏ပြောင်းလဲ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုကိုကင်းချိုးဖောက်လေ့လာတွေ့ရှိ cortical function ကို၏ချို့ယွင်းတားစီးအခြေခံစေခြင်းငှါအကြံပြုTomasi et al, 2010; Gu et al, 2010).
ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုမကြာခဏကြွက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူး (SA) ကိုမူးယစ်ဆေးဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားနေကြဘယ်မှာစမ်းသပ် Paradigm အတွက် preclinically လုပ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ မတူညီတဲ့လုပ် SA ပုံစံများအလုပ်သမားအသုံးပြုပုံစမ်းသပ် compulsive မူးယစ်ဆေးရှာကြံ (အပါအဝင်မူးယစ်ဆေးစွဲအတော်ကြာလက်ခဏာ features တွေမျိုးပွားနိုင်ပါပြီVanderschuren နှင့် Everitt, 2004), ထိန်းအကွပ်မဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု (Ahmed ကနှင့် Koob, 1998), နှင့်လုပ် SA ဖို့မူးယစ်ဆေးလှုံ့ဆျောမှုတိုးလာ (Paterson နှင့် Markou, 2003) ။ ဤအင်္ဂါရပ် (မိမိဆန္ဒအလျောက်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုနှင့်အတူဆက်စပ် neuroplastic ဖြစ်ရပ်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဤမော်ဒယ်များအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မျက်နှာတရားဝင်မှုတစ်ခုစမ်းသပ် tool ကိုအောင်ရောဘတ် et al, 2007) ။ ထိုကဲ့သို့သောပေလေ့လာမှုများအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာ striatal ဒေသများ၏တုံး DA Response အဖြစ်ကိုကင်းစွဲ၏သို့သော်တိကျတဲ့လက်တွေ့ဆက်စပ်မှု, (Volkow et al, 1993; Martinez et al, 2004), ရိုးရာရေတိုရေရှည်, ကန့်သတ် - အသုံးပြုမှုကန့်သတ်ကင်း SA ပါရာဒိုင်းများကလုံလောက်စွာမော်ဒယ်ပုံပေါ်မထင်ရ, အစား 'sensitized' (ဆိုလိုသည်မှာ, တိုးမြှင့်) dopaminergic တုံ့ပြန်မှုပုံမှန်အားဖြင့်လေ့လာတွေ့ရှိကြသည် (Narendran နှင့် Martinez, 2008) ။ ထို့အပြင်အတိုင်းအတာဖြစ်သောဤမော်ဒယ်များလူ့ neuroimaging လေ့လာမှုများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသည့်မျိုးစုံ neurofunctional ပွောငျးလဲမသိသောဖြစ်နေဆဲပုံတူပွား။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့ Basal map မှသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (MRI) ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကင်းလုပ် SA တစ်ကြွက်မော်ဒယ်အတွက်ဦးနှောက် function ကို evoked ။ တစ်ဦးကအချိန်ကြာမြင့်စွာ (52 ရက်ပေါင်း), တိုးချဲ့-access ကို (12 ဇ) SA protocol ကိုလူသားတွေအတွက်မြင့်မားသောထိုး, နာတာရှည်ကင်းအလွဲသုံးစားမှု (၏ဝိသေသလက္ခဏာများပုံစံအလုပ်ခံခဲ့ရGawin နှင့် Ellinwood, 1988; Briand et al, 2008) ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲ abstinence ကာလ (မူးယစ်ဆေးဝါး၏စူးရှသောအဆိပ်သက်ရောက်မှု minimize ရန်နှင့်ကင်း၏ Self-စီမံခန့်ခွဲမြင့်မားသောဆေးများဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်လှုံ့ဆျောမှုသေချာစေရန်မိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်ရောဘတ် et al, 2007) ။ တစ်ဦး 10 ရက်ကြာ detoxification ကာလပြီးနောက်ကျနော်တို့ microvascular Basal နှောက်အသှေးကိုအသံအတိုးအကျယ် (bCBV), ဦးနှောက် function ကိုအနားယူတစ်ခုသွယ်ဝိုက်ညွှန်းကိန်း (တိုင်းတာGaisler-ဆော်လမွန် et al, 2009; သေးငယ်သော et al, 2004), နှင့်တစ်ဦး CBV-based pharmacological MRI (phMRI) protocol ကို အသုံးပြု. DA-release စိတ်ကြွဆေးများကရူးနှမ်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်တုံ့ပြန်မှုပုံဖော်နေဖြင့် dopaminergic စနစ်၏ reactivity ကိုအကဲဖြတ် (Gozzi et al, 2010; Schwarzer et al, 2004) ။ ဆက်စပ်မှု (bCBV) အနားယူနှင့်စိတ်ကြွဆေး-evoked (rCBV) တုံ့ပြန်မှုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်ဧရိယာများ၏စုဆောင်းမှုနှင့် functional တုန့်ပြန်ထိန်းချုပ်ဆားကစ်အတွက် dysregulation ခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ကြိုးစားမှုအတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြအကြားပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ခေတ်လွန် histopathological စာမေးပွဲအဆိုပါပုံရိပ်တွေ့ရှိချက်တိုက်ရိုက်သွေးကြောနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကင်းလုပ် SA ၏ neurotoxic သက်ရောက်မှုများ၏အလားအလာအလှူငွေအကဲဖြတ်ရန်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
စမ်းသပ်ချက်တိရိစ္ဆာန်သက်သာချောင်ချိရေးနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအုပ်ချုပ်အီတလီစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရမည်ခဲ့ကြသည်။ protocol များကိုလည်းဒေသခံတစ်ဦးကိုတိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုကော်မတီကပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြ, ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်၏အခြေခံမူများလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ (NIH ထုတ်ဝေ 86-23, 1985 ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော) ။
ကိုကင်းလုပ် SA များအတွက်ယန္တရား
ကိုကင်းလုပ် SA ခံယူကြောင်းကြွက် (ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့အော်ပရေတာအခန်းကိုစမ်းသပ်ခဲ့ကြMoretti et al, 2010) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်အခန်းထဲက (Med Associates မှ, စိန့် Albans, VT) တစ်ဦးချင်းစီလီဗာအထက်တွင်ထားရှိကာ cue အလင်းနှင့်တစ်ဦး 2900-Hz သေံ module ကိုတပ်ဆင်ပေးခဲ့သည်။ တစ်ခုကပြုတ်ရည်စုပ်စက် single-ရုပ်သံလိုင်းအရည်ဆုံလည် (Instech Laboratories, Plymouth အစည်းအဝေး, PA) မှပြင်ပပြွန်မှတဆင့်ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဒေတာကိုရှာမှီးခြင်းနှင့်အော်ပရေတာ-အချိန်ဇယားသတ်မှတ်ချက်ဘောင်တစ်ခု Med-PC ကို software ကို (Med Associates မှ) ကထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည်။
ကိုကင်းလုပ် SA လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
30-275 ဂရမ်အလေးချိန်တစ်ဦးက 300 စုစုပေါင်းအထီး Lister-hood ကိုကြွက် (ချားလ်စ်-မြစ်, Margate, Kent, ဗြိတိန်) တစ်ဦးချင်းရရှိနိုင်ပါရေနှင့်အတူတစ်ဦး temperature- နှင့်စိုထိုင်းဆ-controlled အခန်းတစ်ခန်း၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည် ကြော်ငြာ libitum။ တိရစ္ဆာန်များ (300 ဆ±) 10 ဂရမ်တစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စမ်းသပ်မှုတစ်လျှောက်လုံးကန့်သတ်စားရကြ၏။
(သူတို့ရဲ့ရောက်ရှိပြီးနောက်ကြွက် 1 တစ်ပတ် acclimatized ခဲ့ကြသည်များနှင့်ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့နောက်ပိုင်းတွင် jugular သွေးကြောထဲမှာပြွန်နှင့်အတူကိုထညျ့သှငျးMoretti et al, 2010) ။ ၇ ရက်ကြာပြန်လည်နာလန်ထူပြီးနောက်ကြွက်များကိုအော်ပရေတာခန်းသို့ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ ကိုကင်း SA လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအားဖြည့်ရန်သတ်မှတ်ထားသောအချိုးအစား (FR)7အစီအစဉ်အောက်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ တက်ကြွသောလီဗာပေါ်ရှိစာနယ်ဇင်းတိုင်းသည် ၀.၁ မီလီမီတာကိုကိုကင်း Hydrochloride solution (ပြုတ်ရည်နှုန်း ၃၀၀ μgနှင့် ၃၀၀ ဂရမ်အလေးချိန်ရှိသောကြွက်များတွင် ၁ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်နှင့်ကိုက်ညီ) ပေါင်းထည့်ပြီး stimulus ၏တပြိုင်နက်တည်း illumination နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ 1 s အဘို့အအခန်းထဲကအလင်း၏အလင်းနှင့်မျိုးသုဉ်း။ 'မလှုပ်မရှား' ဖြစ်သောလီဗာကို နှိပ်၍ ပရိုဂရမ်၏အကျိုးဆက်များမရှိပါ။ မူးယစ်ဆေးဝါးပြန့်ပွားမှုတစ်ခုချင်းစီကို (ဆုလာဘ်ဖြန့်ဝေခြင်း) သည် ၂၀ နှစ်လီဗာပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။ ပထမ ဦး ဆုံး 'လေ့ကျင့်ရေး' အစည်းအဝေး ၃ ခုကိုထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်မှု ၅၀ သို့မဟုတ် ၂ နာရီခွဲပြီးနောက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆက်တွဲအစည်းအဝေး ၃၀ တွင်ကိုကင်းသုံးစွဲနိုင်သည့်အချိန်ကို ၁၂ နာရီ (၁၈၀၀ - ၀၆၀၀ နာရီ) အထိတိုးချဲ့ခဲ့သည်၊ ယူနစ်ပမာဏသည် ၀.၁၅၀ μg / ပြုတ်ရည် (၁.၅ မီလီဂရမ် / ၁.၁ မီလီဂရမ် / ml ကိုကိုကင်းဖြေရှင်းချက်) နှင့်ကြွက်များတွင် ၀.၅ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်နှင့်ညီသည်။ ၃၀၀ ဂရမ်အလေးချိန်ရှိသည်၊ FR သည်တဖြည်းဖြည်း ၃ သို့တိုးလာသည် (အစည်းအဝေးများ ၄ မှ ၆)၊ နောက်ဆုံးတွင် ၅ ခုအထိ (ကျန် ၂၇ ခု) သို့တိုးလာသည်။
ပြွန် patency ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်သည်ထင်ရှားကြောင်းဘာသာရပ်များ (ဆိုလိုသည်မှာရောဂါကူးစက်မှု၏နိမိတ်လက္ခဏာများပြသ) ကလေ့လာမှု (လုံးဝ 11 ဘာသာရပ်များ) မှဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲ 48-72 ဇ abstinence ကာလစူးရှသောကိုကင်း-သွေးဆောင်မူးယစ်၏အန္တရာယ်ကို minimize လုပ်ဖို့ရက်ပေါင်း 16 (session တစ်ခု 14, 72 ဇ), 23 (session တစ်ခု 18, 72 ဇ), နှင့် 31 (session တစ်ခု 23, 48 ဇ) ရက်နေ့မှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ session 30 နှစ်ခုအပိုဆောင်းအစည်းအဝေးများအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ပိုရှည် (5 ရက်) မူးရူး abstinence အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့သောကြားကာလအလုပ်ဘာသာရပ်များ၏အတော်လေးကြီးမားတဲ့အရေအတွက်ကိုကျော် MRI စကင်နှင့်လုပ် SA protocol ၏အချိန်ကိုက်ကိုက်ညီဖို့ကြောင့်လိုအပ်ချက်၏မိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ အိမ်လှောင်အိမ်အတွင်းတစ်ဦးက 10 ရက်ကြာ detoxification ကာလပုံရိပ်စမ်းသပ်မှုမတိုင်မီမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ယာဉ်လုပ် SA လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
14 ကြွက်များ၏တစ်ဦးကအုပ်စုတစ်စုအခြေခံရည်ညွှန်းအုပ်စုတစ်စုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့အဆိုပါဘာသာရပ်များအော်ပရေတာကာလအတွင်းအစားကင်း၏မော်တော်ယာဉ် (ဆား, 0.1 ml) ၏အသုံးပြုမှုကို မှလွဲ. တစ်ဦး jugular ပြွန်နှင့်အတူကိုထညျ့သှငျးနှင့် (နံပါတ်, SA အစည်းအဝေးများ၏ကြာချိန်နှင့် abstinence အပါအဝင်) တူညီသောသင်တန်းနှင့်လုပ် SA လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည် အစည်းအဝေးများ။
imaging လေ့လာမှုများကနောက်ဆုံး SA session တစ်ခုပြီးနောက် 10 ရက်ပေါင်းဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ တိရိစ္ဆာန်ပြင်ဆင်မှုနှင့် MRI ဝယ်ယူ parameters များကိုယခင်က ( သာ. ကြီးအသေးစိတျတှငျဖျောပွထားပြီGozzi et al, 2010; Schwarzer et al, 2004) ။ အတိုချုပ်, ကြွက်, 3% halothane နှင့်အတူ anesthetized tracheotomized နှင့်သူတွေဟာတစ်စက်မှုအသက်ရှူကိရိယာတွေနဲ့လေဝင်လေထွက်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ femoral သွေးလွှတ်ကြောများနှင့်သွေးကြော cannulated ခဲ့ကြသည်နှင့်တိရိစ္ဆာန်များ D-tubocurarine နှင့်အတူအောက်ပိုင်းသေခဲ့သည်။ ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက် halothane အဆင့်% 0.8 ဟုသတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အားလုံးဘာသာရပ်များ၏ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ဇီဝကမ္မအကွာအဝေးအတွင်းထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်သွေးလွှတ်ကြောသွေးဖိအား (MABP) ကို femoral သွေးလွှတ်ကြောမှတဆင့်အစဉ်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဆိုလိုခဲ့သည်။
MR image ကိုဝယ်ယူ
ခန္ဓာဗေဒနှင့် fMRI အချိန်စီးရီးများကို Bruker Avance 4.7 Tesla စနစ်တွင်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ တိရိစ္ဆာန်များကိုထုံးစံအတိုင်းပြုလုပ်ထားသည့်ကိုင်ဆောင်ထားသည့်အထောက်အပံ့တွင်ကျရောက်လေ့ရှိပြီး 'Rat Brain' ကွေးနေသော quadrature two-loop လက်ခံကွိုင် (Bruker, Ettlingen, ဂျာမနီ) သည်တိရစ္ဆာန်ခေါင်းခွံ၏ထိပ်တွင်တပ်ဆင်ပြီးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်နှင့်ကပ်ထားသည်။ ထို့နောက်ထိုသတ္တ ၀ ါကို ၇၂ မီလီမီတာအမြင့်ရှိရေဒီယိုလှိုင်းများကိုထုတ်လွှင့်ရန်အသုံးပြုသည့် birdcage resonator (Bruker) သို့တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ကွိုင်နှစ်ခုလုံးကိုထုတ်လုပ်သူမှထောက်ပံ့ပေးသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။
ကို AT2-weighted ခန္ဓာဗေဒအသံအတိုးအကျယ်ရှားပါး sequence ကို (TR = 5461 ms, TE သုံးပြီးဝယ်ယူခဲ့သည်EFFအချိန်-Series ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် = 72 ms, ရှားပါးအချက် 8, FOV 40 မီလီမီတာ, 256 × 256 matrix, 20 တဆက်တည်း 1 မီလီမီတာအချပ်) (TREFF= 2700 ms, TEEFF≈111မီလီမီတာတစ်အလုပ်လုပ်တဲ့ pixel အသံအတိုးအကျယ်အလျှော့ပေးလိုက်လျောအတူတူပင် Spatial လွှမ်းခြုံနှင့်အတူ = 32 ms, ရှားပါးအချက် 27, ၎င်းကို = 1),3။ စုစုပေါင်း MRI အချိန်စီးရီးဝယ်ယူအချိန်နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများ (58 repetitions) 128 မိခဲ့သည်။
ငါးကိုကိုးကားပုံရိပ်တွေကိုအောက်ပါတို့သည်ဆနျ့ကငျြဘအေးဂျင့် Endorem (Guerbet, Roissy CdG Cedex, ပြင်သစ်) ၏ 2.67 ml / ကီလိုဂရမ် (ဦးနှောက်အသှေးကိုအသံအတိုးအကျယ် (rCBV) မှအထိခိုက်မခံသည့် fMRI signal ကိုအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဖို့ထိုးသွင်းခဲ့ပါတယ်Mandeville et al, 1998; Schwarzer et al, 2003) ။ D-စိတ်ကြွဆေး (0.5 / ကီလိုဂရမ် mg) ဆနျ့ကငျြဘအေးဂျင့်ဆေးထိုးပြီးနောက်သွေးကြောသွင်း 25 မိအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်နှင့် MRI data တွေကိုစိန်ခေါ်အောက်ပါ 25 မိ၏ကာလအတွင်းဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။ -amphetamine ၏ဆေးထိုးယခင်ပေါ်တွင်အခြေခံရွေးချယ်ခဲ့သည် Vivo အတွက် လေ့လာမှုများ (Schwarzer et al, 2004; Gozzi et al, 2011) ။ ၎င်းဆေးသည် ဦး နှောက်ကိုအားဖြည့်ပေးသည်ကိုသေချာစေပြီး 'မျက်နှာကျက်' rCBV တုံ့ပြန်မှုကိုမထုတ်လုပ်နိုင်ပါ။Micheli et al, 2007), နှင့် homeostatically halothane မေ့ဆေးအောက်မှာလျော်ကြေးငွေဖြစ်ကြောင်းယာယီ MABP တုံ့ပြန်မှု elicits (Gozzi et al, 2007; Zaharchuk et al, 1999).
တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်မှုများအတွက် bCBV အချိန်စီးရီး image ကိုဒေတာအထွေထွေ linear မော်ဒယ် (များ၏မူဘောင်အတွင်းဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်Worsley et al, 1992) ။ တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များ (က stereotaxic ကြွက်ဦးနှောက် MRI template ကို set ကိုမှ Spatial ပုံမှန်ခဲ့ကြသည်Schwarzer et al, 2006a) ။ signal ပြင်းထန်မှုအပြောင်းအလဲများကို (bCBV သို့ကူးပြောင်းခဲ့ကြt) တစ်ဦး pixel ပညာအခြေခံပေါ်မှာယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ (Chen က et al, 2001; Mandeville et al, 1998) ။ bCBV အချိန်စီးရီးဆနျ့ကငျြဘအေးဂျင့်ဆေးထိုးပြီးနောက် 4.5 မိစတင်တစ်ဦး 6.8-မိအချိန်ပြတင်းပေါက်ကျော်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအဘို့အ bCBV volumes ကိုအချိန်-ပညာရှိ 10 အချိန်မှတ်ပျမ်းမျှအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ကြသည်ဆိုလို။ linear detrending (ဆနျ့ကငျြဘအေးဂျင့် washout များအတွက်အကောင့်မှမိတ်ဆက်ခဲ့သည်Schwarzer et al, 2003) ။ Voxel ပညာရှိအုပ်စုကိုစာရင်းဇယား FSL (သုံးပြီးထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်Smith က et al, 2004) 0.7 မီလီမီတာ Spatial မွေ့တဲ့ multilevel Bayesian အခြ, တစ်ဦးကိုအသုံးပြုပြီး Z တံခါးခုံ> 1.6 နှင့်တစ်တညျ့စပျစ်သီးပြွတ်အရေးပါမှုတံခါးခုံ p= 0.01 ။
D-စိတ်ကြွဆေးမှ phMRI တုံ့ပြန်မှု
MRI signal ကိုပြင်းထန်မှုပြောင်းလဲမှုများကိုယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဒဿမကိန်း CBV (rCBV) သို့ကူးပြောင်းခဲ့ကြ (Mandeville et al, 1998) နှင့်အသွေးကိုရေကူးကန်ကနေဆနျ့ကငျြဘအေးဂျင့်ဖျက်သိမ်းရေးများအတွက်အကောင့်မှ detrended (Schwarzer et al, 2003) ။ Unsmoothed, စိတ်ကြွဆေးစိန်ခေါ်မှုများအတွက် rCBV အချိန်စီးရီး 12.5-မိ prechallenge နှင့် 24-မိ postchallenge ဝင်းဒိုးကိုဖုံးအုပ်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ Voxel ပညာရှိစာရင်းဇယား 0.7 မီလီမီတာ Spatial မွေ့တဲ့ Feat သုံးပြီးနှင့်မော်ဒယ် function ကို (နောက်ဆက်တွဲပုံ S1) ကို အသုံးပြု. ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် rCBV တုံ့ပြန်မှုများ၏ယာယီပရိုဖိုင်းကိုဖမ်းယူ (Schwarzer et al, 2006b) ။ higher-level ကိုအုပ်စုကိုနှိုင်းယှဉ် multilevel Bayesian အခြနှင့်အတူထွက်သယ်ဆောင်မှာ thresholded ခဲ့ကြသည် Z> တစ် ဦး တညျ့စပျစ်သီးပြွတ်အရေးပါမှုတံခါးခုံနှင့်အတူ> 1.6 p= 0.01 ။ အထူးသကိုကင်းကြွက် D-စိတ်ကြွဆေးတစ်ခုပြောင်းလဲ striatal reactivity ကို၏ယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်နိုင်ဖို့အတွက်အဓိက subcortical ဧရိယာ (striatum, thalamus, hippocampus, hypothalamus အဆိုပါ striatum, ventral pallidum, BNST နှင့် amygdala) ၏ 3D binary မျက်နှာဖုံးကိုအသုံးပြုပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့သည် ကြွက်ဦးနှောက် Atlas ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး (Schwarzer et al, 2006a) နှင့်ပိုမိုမြင့်မား-Level FSL ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမတိုင်မီ rCBV အချိန်စီးရီး prethreshold လေ့ရှိတယ်။ ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (မျိုးစုံကိုနှိုင်းယှဉ်၏နံပါတ်လျှော့ချခြင်းအားဖြင့်ဆန်းစစ်၏စာရင်းအင်းပါဝါတိုးပွါးHuettel et al, 2004) ။ တစ်ဦးအယူအဆ-အခမဲ့ထုံးစံ၌အကျိုးသက်ရောက်မှု၏ဒေသဆိုင်ရာတိကျတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်ဦးနှောက်တစ်လျှောက်လုံးစိတ်ကြွဆေးတုံ့ပြန် generalized လျှော့ချထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့, တူညီတဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Non-mask rCBV ဒေတာအစုံ (နောက်ဆက်တွဲပုံ S5) အပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲခဲ့သည်။ အကျိုးစီးပွား (või) ၏ Volume ကိုကို (စိတ်ကြွဆေးစိန်ခေါ်မှုများအတွက် bCBV တန်ဖိုးများနှင့်အချိန်သင်တန်းများတွင်ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ထုတ်ယူခဲ့ကြသည်ဆိုလိုSchwarzer et al, 2006a; Gozzi et al, 2008) ။ ယုတ် bCBV တွင်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများကို ANOVA စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကို အသုံးပြု၍ နှိုင်းယှဉ်မှုအမျိုးမျိုးအတွက် Fisher ၏စမ်းသပ်မှုကို အသုံးပြု၍ အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ဆက်နွယ်နေကြောင်း bCBV ၏ Maps ကိုနဲ့ D-စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီး rCBV တုံ့ပြန်မှု FSL (သုံးပြီးကိုယ်စားလှယ်ဒေသများတွင် bCBV မှရည်ညွှန်းနှင့်အတူအုပ်စုအဆင့်ကိုမှာ GLM မူဘောင်အတွင်းတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်Schwarzer et al, 2007a, 2007b) ။ ကိုယ်စားလှယ် VOIs တစ်အရေအတွက် intergroup bCBV မြေပုံ (medial prefrontal, နောက်ကျနေခဲ့သည်, orbitofrontal, somatosensory cortex, caudate putamen, နျူကလိယ accumbens, reticular thalamus နှင့် posteroventral thalamus) ၏ရလဒ်များကိုအပေါ်အခြေခံပြီးရွေးချယ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီvõiများအတွက်ဒီဇိုင်း matrix ကိုပုခန္ဓာဗေဒဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ bCBV signal ကိုဆိုလိုခြင်းနှင့်အခြားဟာဖြတ်ပြီးသုည-ယုတ် bCBV အားနည်းချက်ကို်အုပ်စုဖမ်းယူတဲ့ regressor ဖွဲ့စည်း N ရွေးချယ်ထားသောရည်ညွှန်းဖွဲ့စည်းပုံမှာကနေအုပ်စုဘာသာရပ်များ။ အဆိုပါ Z-statistic ပုံရိပ်တွေရည်ညွှန်းတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆက်စပ်မှုဖမ်းယူထူးခွားသညျ့မှတဆင့်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်များနှင့်အတူ thresholded ခဲ့ကြသည် Z> 1.6 နှင့်တစ် ဦး တည့်စပျစ်သီးပြွတ်အရေးပါမှုတံခါးခုံကို p= 0.01 ။ ဆက်နွယ်နေကြောင်း bCBV နှင့် rCBV တုံ့ပြန်မှု၏ linear ဆုတ်ယုတ်ကွက် bCBV ကြံစည်ခြင်းဖြင့်တွက်ချက်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီးစိတ်ကြွဆေးမှ rCBV တုံ့ပြန်မှုကိုဆိုလိုတာ, အဆုံးစွန်သောယုတ်တစ်ဦး 20 မိကျော်တုံ့ပြန်မှု (4-24 မိ postinjection) အချိန်ပြတင်းပေါက်အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလျက်ရှိခဲ့ကြသည်။
Histopathological အကဲဖြတ်ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ 10 ကင်းဘာသာရပ်နှင့် 8 ကျပန်းရွေးချယ်တော်မူထိန်းချုပ်မှုအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည် (Barroso က-Moguel et al, 2002) ။ အဆိုပါ MRI စမ်းသပ်မှုပြီးနောက်ကြွက်နက်ရှိုင်းသောမေ့ဆေး (halothane 5%) နှစ်အောက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်နှင့် fixative မီဒီယာ (15% buffered formalin) ၏ 10-မိ aortic perfusion ဆားတစ် 5-မိပြုတ်ရည်များကရှေ့ပြေး, ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ Perfused ဦးနှောက်ကနောက်ထပ် 24-72 ဇများအတွက် fixative ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာဖယ်ရှားခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းထားခဲ့ကြသည်။ ဦးနှောက်ချုံ့ခြင်းထို့နောက် 200-400 ဂရမ်အလေးချိန်ကြွက်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေတဲ့ဦးနှောက် matrix ကို (asi တူရိယာ) ကို အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ တစ်ရှူးနမူနာ, embedded 5-μm-ပါးလွှာချပ်သို့ sectioned နှင့် hematoxylin-eosin နှင့် Luxol မြန်အပြာရောင် (ပေါင်းစပ်နှင့်အတူစွန်း paraffin ခဲ့ကြသည်Scholtz, 1977) ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအဆိုပါအချပ်များနှင့်ဦးနှောက်ဒေသများအတွက် cingulate နှင့် prefrontal cortex, caudate putamen, Corpus callosum, hippocampus (C2), cerebellum (purkinje ဆဲလ်), နှင့် substantia nigra ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစာမေးပွဲနှစ်ခုလေ့လာမှု-မျက်စိကန်းသောတိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးရောဂါဗေဒအားဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
လူအားလုံးတို့သည်ဘာသာရပ်များကိုအောင်မြင်စွာ 33 ရက်ပေါင်းနေတဲ့အချိန်ကာလအတွင်း၎င်း 52 ကင်းလုပ် SA အစည်းအဝေးများပြီးစီး။ အသုံးပြုတဲ့လုပ် SA အချိန်ဇယား (လေ့လာမှုတစ်လျှောက်လုံးကိုကင်းတဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာနှင့်ရေရှည်တည်တံ့စားသုံးမှုရရှိနိုင်မည်ပုံ 1) ။ ဘာသာရပ်တစ်ခုစီအတွက်လုပ် SA ကိုကင်းများ၏ပျမ်းမျှတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာစားသုံးမှု 1138.4 ± 33.3 မီလီဂရမ် / ကြွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ linear ဆုတ်ယုတ်အားနည်းပေမယ့်သိသိသာသာမီးမောင်းထိုးပြပေမယ့်တက်ကြွအဆင့်ကိုပုံနှိပျနှင့်ကိုကင်းစားသုံးမှုနှစ်ဦးစလုံး (စမ်းသပ်မှု၏သင်တန်းတစ်လျှောက်လုံးမဟုတ်ဘဲတည်ငြိမ်ဖြစ်ထငျရှားpအားလုံးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအစည်းအဝေးများ (အစည်းအဝေးများ 0.03-4.62, FR 4-31, မူးရူး abstinence ကြားကာလ 3-5 ဇ) (နောက်ဆက်တွဲပုံ S48) နှိုင်းယှဉ်သောအခါအချိန်ကျော် <72, F ကို = 2) ခြုံငုံတိုးမြှင့်ကိုကင်းစားသုံးမှုဆီသို့လမ်းကြောင်းသစ်။
အဆိုပါကင်းလုပ် SA အုပ်စုတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောတက်ကြွလီဗာပုံနှိပျ (က) နံပါတ် (N= 19) နှင့်ထိန်းချုပ်မှု (ဆားလုပ် SA, Nအဆိုပါလုပ် SA အစည်းအဝေးများအတွင်း = 14) ။ ကိုကင်းလုပ် SA လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိုး (FR) အားဖြည့်များ၏ 1 အချိန်ဇယားအောက်တွင်အစပျိုးခဲ့သည်။ ပထမသုံးလေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများ ...
Basal ဦးနှောက် function ကိုအပေါ်နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့ကိုကင်းလုပ် SA နှင့်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များအတွက် bCBV တိုင်းတာနှင့်အုပ်စုများအကြားကစာရင်းအင်းသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုပြသည့်ဒေသများတစ်ခုသို့ဆက်စပ်။ အဆိုပါလုပ် SA ကိုကင်းနှင့်အတူကြွက်သိသိသာသာ (ထိန်းချုပ်မှုကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအများအပြားဟာဦးနှောက်ဧရိယာများတွင် bCBV လျှော့ချပြသကိန်းဂဏန်းများ2နှင့် and3) .3) ။ အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်သည့်နျူကလိယ accumbens ၏ medial-prefrontal, cingulate, orbitofrontal cortex, septum, ventral hippocampus, core ကိုဒေသတွင်း၌အဖြစ် raphe အရေးပါနှင့် reticular thalamic ဒေသများရှိထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ အုပ်စုများအကြားစုစုပေါင်း CBV အတွက်အဘယ်သူမျှမခြားနားချက် (လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်p= 0.23, ကျောင်းသားရဲ့ t-test) ။ ဆက်စပ်မှု (ဆန်းစစ်အပေါငျးတို့သ VOIs အတွက် bCBV နှင့်စုစုပေါင်းကင်းစားသုံးမှုအကြားမတွေ့P> 0.16, အားလုံး VOIs) ။
ကြွက်နာတာရှည် Self-စီမံခန့်ခွဲကင်းအတွက်သိသိသာသာနိမ့် bCBV ပြသည့်ဒေသများခန္ဓာဗေဒဖြန့်ဖြူး (ကိုကင်းလုပ် SA; N= 20) vs ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များ (မော်တော်ယာဉ်လုပ် SA; N= 14; Z> 1.6, စပျစ်သီးပြွတ်ဆုံးမခြင်း pကိုယ်စားလှယ်အလျားလိုက်အတွက် = 0.001) ...
ကိုယ်စားလှယ် 3D ခန္ဓာဗေဒ volumes ကို (VOIs အတွက် bCBV ဆိုလို Schwarzer et al, 2006a) (ကိုကင်းလုပ် SA များအတွက်N= 20) နှင့်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များ (ဆားလုပ် SA; N= 14) ။ AcbC သည်နျူကလိယ accumbens ၏အမာခံ; AcbSh သည်နျူကလိယ accumbens ၏ shell ကို; မေီ, amygdala; CG, cingulate cortex; ...
D-ဖက်တမင်းဆေးပြားမှ functional တုံ့ပြန်မှု
striatal dopaminergic reactivity ကိုစုံစမ်းနိုင်ရန်အတွက်, ကင်းလုပ် SA နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်ဟာ DA-release စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူစိန်ခေါ်ခဲ့သည်, နှင့်မူးယစ်ဆေးများကရူးနှမ်းအဆိုပါ rCBV တုံ့ပြန်မှုများ၏ပြင်းအားအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ပွောငျးလဲ၏ရှေ့မှောက်တွင် voxel ပညာရှိစာရင်းဇယားမှတဆင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်း (Schwarzer et al, 2004), စိတ်ကြွဆေး) နောက်ဆက်တွဲပုံ S3 (ဘာသာရပ်များနှစ်ခုစလုံးအုပ်စုများအတွက် subcortical နှင့် cortical ဒေသများ၏ကြံ့ခိုင် activation ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နာတာရှည်ကင်းထိတွေ့ကြွက် (ထိန်းချုပ်မှုကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပု striatum အတွက်စိတ်ကြွဆေးတစ်ခု attenuation အလုပ်လုပ်တဲ့တုံ့ပြန်မှုပြပုံ4နှင့်နောက်ဆက်တွဲပုံ S3) ။ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို un-detrended rCBV အချိန် profile များကို (နောက်ဆက်တွဲပုံ S4) တွင်လည်းသိသာခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းကြောင်းကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေးဖို့ striatal တုံ့ပြန်မှုများ၏ပြင်းအား (inverse တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာကင်းစားသုံးမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းခံရဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်p= 0.03, ပုံ 4) ။ စိတ်ကြွဆေးလျှော့ချအလုပ်လုပ်တဲ့တုံ့ပြန်မှုအပိုဆောင်း foci အာရုံခံ-မော်တာများနှင့် orbitofrontal cortex (နောက်ဆက်တွဲကိန်းဂဏန်းများ S3 နှင့် S5) တွင်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြသည်။
Orthogonal အမြင် (က: အလျားလိုက်, b: Coronal, က c: sagittal) ကြွက်နာတာရှည် Self-စီမံခန့်ခွဲကင်း D-စိတ်ကြွဆေးတစ်ခု attenuation rCBV တုံ့ပြန်မှုပြသည့် subcortical ဦးနှောက်ဒေသ (ကိုကင်းလုပ် SA; N= 20) vs ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များ (မော်တော်ယာဉ်လုပ် SA; N= 14; ...
စိတ်ကြွဆေး၏အုပ်ချုပ်ရေး MABP (နောက်ဆက်တွဲပုံ S6) တွင်ယာယီတိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်မှုယာယီလုပ်ငန်းလည်ပတ်တုံ့ပြန်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းနှင့်ကောင်းစွာ vasopressive တုံ့ပြန်မှု homeostatically သိသိသာသာ rCBV ကိုပြောင်းလဲထုတ်လုပ်မပါဘဲလျော်ကြေးငွေထားတဲ့အတွင်းသွေးစီးဆင်းမှု autoregulatory အကွာအဝေး (အတွင်းခဲ့မခံခဲ့ရGozzi et al, 2007; Zaharchuk et al, 1999) ။ သွေးလွှတ်ကြောသည်အသွေးဓာတ်ငွေ့ (paCO2 နှင့် paO2) ကို fMRI အချိန်စီးရီး (နောက်ဆက်တွဲဇယား S1) မီနှင့်အပြီးတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ ယုတ်အကျူးသို့မဟုတ် Post-ဝယ်ယူ p အတွက်ကစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်အဘယ်သူမျှမaCO2 အုပ်စုများအကြားတန်ဖိုးများကိုရှာတွေ့ခဲ့သည် (p> 0.1, အားလုံးအုပ်စုများ; တလမ်း ANOVA) ။
ဘီစီစီအမျိုးအစားနှင့် Evoked လုပ်ဆောင်ချက်အကြားဆက်စပ်မှု
Basal အကြားဆက်စပ်မှုတည်ထောင်ရန်နှင့် functional လှုပ်ရှားမှု evoked နှင့်ဤနှစ်ခုပြည်နယ်များရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအတွက် dysregulations စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတှငျကြှနျုပျတို့ bCBV နှင့်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်တုံ့ပြန်မှုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းကြောင်းများအကြားဆက်စပ်မှုကိုတိုင်းတာ။ bCBV နှင့်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် rCBV တုံ့ပြန်မှုများအကြားအဘယ်သူမျှမဆက်စပ်, ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များအတွက်ထင်ရှားသော reticular နှင့် posterior-ventral thalamus ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ, နံရံပစ်ကစားနည်းအတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် rCBV နဲ့ပြောင်းပြန်ဆက်ဆံရေးဟာလေ့လာသည့်ဒေသများတွင်မဆိုအုပ်စုတစ်စုဖြစ်စေ၌တွေ့ -cortical ဒေသများ (နောက်ဆက်တွဲကိန်းဂဏန်းများ S7 နှင့် S8) ။ အဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောဆက်စပ်မှုဟာကိုကင်းလုပ် SA အုပ်စုသည် (နောက်ဆက်တွဲပုံ S8) တွင်လက်ရှိဖြစ်ခဲ့သည်။
တစ်ဦးက histopathological ဦးနှောက်အဖြူနှင့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စ, glial နှင့် Interstitial အခန်း၏အကဲဖြတ်အဖြစ် macro- နှင့် microvascular, ependymal နှင့်နှောက်အမြှေးရောင်အဆောက်အဦများအုပ်စုသည်ဖြစ်စေတစ်စုံတစ်ရာ neurocellular, Interstitial, ဒါမှမဟုတ် microvascular ကိုတွေ့ရှိရပါသည်မီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပါဘူး။ အထူးဆယ်လူလာ pyknosis သို့မဟုတ်ကျုံ့, ဖိုင်ဘာအပြောင်းအလဲတချို့, necrosis နှင့် Interstitial ဖော၏လက္ခဏာမဦးနှောက်ဒေသများတွင်မဆိုဆန်းစစ်လေ့လာခဲ့သည်ကိုမ microvascular နှင့်ဆံချည်မျှင်သွေးကြောအိပ်ရာ၏ပွောငျးလဲ (ဆိုလိုသည်မှာ, Basal အမြှေးပါး dilation သို့မဟုတ်ကှဲထှကျ, သွေးသွန်, endothelial thickened သို့မဟုတ် မြို့ရိုးကို fibrosis, thrombi သို့မဟုတ် occlusions နှင့် endothelial ဆဲလ် necrosis သို့မဟုတ် vacuolation) ။
ကြွက်များတွင်နာတာရှည်, တိုးချဲ့-access ကိုကိုကင်းလုပ် SA လူ့ကိုကင်းစွဲထဲမှာနီးနီးကပ်ကပ်တူတဲ့လက်ခဏာပုံရိပ်တွေ့ရှိချက် neuroimaging ကိုပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ကြောင်း။ လက်ရှိလေ့လာမှုစာရွက်စာတမ်းများ အထူးသကျနော်တို့သိသိသာသာလျှော့ချ bCBV မြင့်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအတွက်သော့ချက်အလှူငွေ (နံရံပစ်ကစားနည်း-cortical ဒေသများ) ရှိသည်သောဒေသများတွင်, ဦးနှောက် function ကိုအနားယူတဲ့အမှတ်အသား, တဏှာနှင့်မျှော်လင့် (နံရံပစ်ကစားနည်း-hippocampal ဒေသများ) လေ့လာတွေ့ရှိနှင့်ဆုလာဘ် (mesolimbic ဒေသများ) ။ ထို့အပွငျကိုကင်းလုပ် SA လျှော့ striatal dopaminergic ဆွဖို့ reactivity ကိုနှင့် reticular thalamus နှင့်နံရံပစ်ကစားနည်း-cortical ဒေသများ၏ activation အကြား inhibitory ဆက်စပ်မှုတွေအတွက် putative အလုပ်လုပ်တဲ့ပွောငျးလဲ၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက် compulsive မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏အမူအကျင့်စကားရပ်သည်ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည် neurobiological အလွှာဟာအစေခံကြောင်းနာတာရှည်နှင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်ကိုကင်းစားသုံးမှုသည်အောက်ပါကြွက်ဦးနှောက် function ကိုအတွက်မျိုးစုံပြောင်းလဲ၏ neuroimaging သက်သေအထောက်အထားသည်။
နာတာရှည်ကင်းအလွဲသုံးစားမှုမကြာခဏကြွက်ဆန္ဒအလျောက်မူးယစ်ဆေး Self-စီမံခန့်ခွဲဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားတဲ့အမူအကျင့် Paradigm အတွက်လုပ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ (ထပ်ခါတလဲလဲမူးရူး-abstinence ကာလနဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာ, တိုးချဲ့-access ကိုကိုကင်းလုပ် SA protocol ကိုအကောင်အထည်ဖော်Parsons et al, 1995; Wilson က et al, 1994; Wilson ကနှင့်ကိရှ, 1996) လူသား High-ထိုး, နာတာရှည်ကင်းအလွဲသုံးစားမှု၏ဝိသေသလက္ခဏာများတူတဲ့ရန်။ တာရှညျလုပ် SA Paradigm (သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခကျအခဲ၏ရှေ့မှောက်တွင်ကြားမှအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပါအဝင်ကင်းစွဲ၏သော့ချက်လက်တွေ့ features တွေမျိုးပွားအစီရင်ခံခဲ့ကြVanderschuren နှင့် Everitt, 2004), နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာမှပြန်သွားကြသည်မှအမြင့်ဆုံး propensity (Deroche-Gamonet et al, 2004) ။ တစ်ဦးကြွက်များ၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူသက်တမ်း၏≈10% ဖုံးအုပ်အလုပ်အဆိုပါနာတာရှည် protocol ကို ( Sharp ကနှင့် La Regina, 1998) ကိုလူနာ neuroimaging လေ့လာမှုများတွင်စာရင်းသွင်းသူများကဲ့သို့သောကိုကင်းဆေးစွဲသိသိသာသာသမိုင်း (> ၆ လ) နှင့်အတူလူနာလူ ဦး ရေကိုတုပရန်ဤသို့ခွင့်ပြုထားသည်။ ထို့အပြင်ကိုကင်းကိုတိုးချဲ့အသုံးပြုခြင်း (ဥပမာ - h6 h) သည်အထူးအာရုံကြောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုပုံစံများကိုအထူးသဖြင့်ပုံစံပြုထားသည်။Briand et al, 2008; ဂျော့ခ်ျ et al, 2007ကိုကင်းဘို့), တိုးမြှင့လှုံ့ဆျောမှု (Paterson နှင့် Markou, 2003), နှင့်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုအတွက်တင်းမာမှု (Ahmed ကနှင့် Koob, 1998) ။ အတင်းအကျပ် abstinence ၏ထပ်ခါတစ်လဲလဲကာလကို (ထိုမူးယစ်ဆေး၏စူးရှသောအဆိပ်သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချဖို့နဲ့ကိုကင်း၏ Self-စီမံခန့်ခွဲမြင့်မားသောဆေးများဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်လှုံ့ဆျောမှုသေချာစေရန်မိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်ရောဘတ် et al, 2007) ။ ပစ္စုပ္ပန် protocol ကိုနှင့်အတူအောင်မြင်စုစုပေါင်းကင်းစားသုံးမှု Short-access ကို Paradigm နှင့်အတူလေ့လာတွေ့ရှိထက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်သော်လည်းမှီတန်ဖိုးများ (စူးရှသောအဆိပ်အတောက်များကန့်သတ်ခြင်းမှလုံလောက်ဝေးလံများမှာMantsch et al, 2004; Wee et al, 2007), သောဤလေ့လာမှုမှာလေ့လာတွေ့ရှိသေးခင်၏မရှိခြင်းကရှင်းပြသည်။
မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုပြောင်းရက်တာဟာမြင့်မားခြင်းနှင့်အနိမ့်နံပါတ်များထားပါတယ်ဘယ်မှာန့်အသတ် access ကို protocols များ, (နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါWilson က et al, 1994), ဒီနေရာမှာအသုံးပြုတဲ့တိုးချဲ့-access ကို protocol ကိုကိုကင်းမြင့်မားအညွှန်းများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လုပ် SA ရရှိနိုင်မည်။ အခြားအုပ်စုများအားဖြင့်သတင်းပေးပို့ခဲ့ရာမှမတူဘဲ (Ahmed ကနှင့် Koob, 1998; Ferrario et al, 2005; Wee et al, 2007ဆက်တိုက်အစည်းအဝေးများကျော်တစ်ဦးတိုးလာကင်းစားသုံးမှုဆီသို့တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်) နောက်ဆက်တွဲပုံ S2 (သိသာခဲ့ပေမဲ့), ငါတို့သည်ထိုးတင်းမာမှုများ၏ခြောသက်သေအထောက်အထားများကိုစောငျ့ရှောကျခဲ့ပါဘူး။
အသုံးပြုသောပုံစံ၏အကန့်အသတ်တစ်ခုမှာဆိုးကျိုးများရှိသော်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုအပြုအမူတိုင်းတာမှုများမပါ ၀ င်ခြင်းဖြစ်သည်။ Deroche-Gamonet et al, 2004လူသားများတွင်စွဲတစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်အဖြေရှာတဲ့စံ (စဉ်းစားကြောင်း), တစ်ဦးအမူအကျင့်စရိုAmerican Psychiatric Association, 2008) ။ ဒီ feature ca. အတွက်ပစ္စုပ္ပန်သောကွောငျ့ ကိုကင်းနှင့်ထိတွေ့ကြွက်၏ 20% (Deroche-Gamonet et al, 2004; Ahmed က, 2010), ပစ္စုပ္ပန်အလုပ်အတွက်တစ်ခုသို့ဆက်စပ်သည့်ပုံရိပ်ပွောငျးလဲဒီအပြုအမူပြဘာသာရပ်များ၏အစိတ်အပိုင်းအစုထဲကနေပံ့ပိုးမှုများကိုပါဝင်သည်နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ သို့သော်ဤရိုဒီလေ့လာမှုအတွက်မီးမောင်းထိုးပြရှိသူများအနေဖြင့်သီးခြားသတ်သတ်မှတ်မှတ်အလုပ်လုပ်တဲ့ပွောငျးလဲဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ပေးဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။
တစ်ဦးက 10 ရက်ကြာ washout ကာလကိုကင်း၏စူးရှသော carryover သက်ရောက်မှုထွက်အုပျစိုးနှင့်ဦးနှောက် function ကို၏အစီအမံအပေါ်စူးရှ abstinence လက္ခဏာတွေအလားအလာဝင်ရောက်စွက်ဖက် minimize ဖို့ပုံရိပ်လေ့လာမှုမပြုမီစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ စူးရှသောဆုတ်ခွာဖို့ related နိုင်ပါတယ်သော neurochemical နှင့်အမူအကျင့်ကိုပြောင်းလဲအများစုဟာ (မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲနိုင်၏ရပ်စဲပြီးနောက်6နှင့် 72 ဇအကြားအထွတ်အထိပ်တခုနီးပါးချက်ချင်းစတင်ခြင်းရှိသည်, ယေဘုယျအားဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်ကိုကင်း session တစ်ခုကနေ 2-7 ရက်အတွင်းငြိမ်းBaumann နှင့် Rothman, 1998; Harris ကနှင့် Aston-ဂျုံးစ်, 1993; Malin et al, 2000; Mutschler နှင့် Miczek, 1998; Markou နှင့် Koob, 1992) ။ ဒါဟာပုံရိပ်တွေ့ရှိချက်စူးရှသောကိုကင်း abstinence နှင့်ဆက်စပ်သောယာယီ neurobiological ဖြစ်ရပ်ကနေအဓိကထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းဆံ့ သို့ဖြစ်. မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်လေ့လာတွေ့ရှိအလုပ်လုပ်တဲ့ပွောငျးလဲ (ကိုကင်းပြတ်တောက်ပြီးနောက်-Up တည်ဆောက်ပြခဲ့ကြပြီကြာကြာ-တည်တံ့ neuroadaptational ဖြစ်စဉ်များ (ကိုကင်းတဏှာ၏ဆိုလိုသည်မှာပေါက်ဖွား) မှပံ့ပိုးမှုများဆံ့မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်Lu et al, 2004), နှင့်သောသူတို့သည် relapse မှ propensity နှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါတယ်အဖြစ် Translational ဆက်စပ်မှု၏ဖြစ်ကြသည်။
bCBV ၏ MRI အစီအမံတင်းကျပ်စွာဒေသဆိုင်ရာစွမ်းအင်ဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့်ဦးနှောက်သွေးစီးဆင်းမှု (နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်ကြောင့်ဦးနှောက် function ကိုအနားယူ high-resolution ကိုမြေပုံခွင့်ပြုGaisler-ဆော်လမွန် et al, 2009; Hyder et al, 2001; Gonzalez et al, 1995) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များကို cingulated gyrus, prefrontal cortex, orbitofrontal cortex အဖြစ်ကိုကင်းလုပ် SA ဘာသာရပ်များ၏ striatal နှင့် hippocampal ဒေသများ၌လျှော့ချ bCBV ၏ရှေ့မှောက်တွင်ပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါ frontostriatal အကျိုးသက်ရောက်မှုလျှော့တိုကျရိုကျနှင့် striatal လှုပ်ရှားမှုများတသမတ်တည်းလေ့လာတွေ့ရှိပြီဘယ်မှာကင်းစွဲ, (များ၏လက်တွေ့ neuroimaging သုတေသနနှင့်အတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သဘောတူညီချက်၌တည်ရှိ၏Strickland et al, 1993; Tumeh et al, 1990; လန်ဒန် et al, 1999; Volkow et al, 1992, 1988) နှင့် relapse ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ၎င်းသိမြင်မှုချို့ယွင်း, မလှူ, နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆည်းပူးနေကျော် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးအတူပတျသကျတွေ့ရှိ (စတိန်း et al, 2010; Kalivas et al, 2005; Kalivas, 2004; ဟောင်ကောင် et al, 2010; Strickland et al, 1993) ။ အရေးကြီးတာက, သိမြင်လိုငွေပြမှုကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်ကိုကင်းမှတိုးချဲ့ (သို့သော်ကန့်သတ်မပါ) access ကို (ခွင့်ပြုBriand et al, 2008; ဂျော့ခ်ျ et al, 2007), အလုပ်လုပ် memory နဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်အာရုံစိုက်မှုလုပ်ငန်းများကို (နှစ်ခု prefrontal Cortex-မှီခိုတာဝန်များကို) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အရာဝတ္ထုအသိအမှတ်ပြုမှုအတိုင်းအတာ (က hippocampus-မှီခိုတာဝန်) ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်း။ hippocampal စနစ်များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုလည်းကင်းအသုံးပြုမှုအားဖြင့်ပြောင်းလဲနေကြသည်နှင့်အနေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ် cue-ရူးနှမ်းတဏှာအတွက်အခန်းကဏ္ဍ (play ယုံကြည်နေကြသည်နှစ်ခုလုပ်ဆောင်ချက်များကို Contextual အေးစက်နှင့်မှတ်ဉာဏ်၌ဤဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအားဖြင့်ကစားအခန်းကဏ္ဍနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည် Koob နှင့် Volkow, 2010) ။ အလားတူ, နျူကလိယ accumbens အတွက်လျှော့ချ bCBV နံရံပစ်ကစားနည်း-cortical လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ventrostriatal DA ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်နှင့်ဖြန့်ချိ (အကြားထူထောင်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပေးမမျှော်လင့်ဘဲမဟုတ်ခဲ့Kalivas et al, 2005; လူမျိုး et al, 2007) ။ ဒီနှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်း၌, မကြာသေးမီပေပုံရိပ်လေ့လာမှုများ (နှိုင်းယှဉ်မှုဘာသာရပ်များမှဆွေမျိုးကိုကင်းစွဲအတွက် endogenous DA ၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်ပြသMartinez et al, 2009) နှင့်မျောက်သုတေသန (နာတာရှည်ကင်းအသုံးပြုမှုပေါ်မှာ striatal ဒေသများရှိတိုးမြှင့်ကင်းထိတွေ့မှုပိုမိုသိသာဖြစ်လာခဲ့သည်တဲ့အင်္ဂါရပ်လျှော့ဂလူးကို့စအသုံးချထင်ရှားPorrino et al, 2007).
focal bCBV လျှော့ချလည်း reticular thalamic နှင့် raphe အရေးပါအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ယခင်တွေ့ရှိချက် (abstinent ကင်းအလွဲသုံးစားပြုသူများ၏ thalamus အတွက်ပြောင်းလဲ GABAergic neurotransmission ဖေါ်ပြခြင်းလူ့ neuroimaging လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်Volkow et al, 1998) နှင့်ကိုကင်းများ၏မူးရူးအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါ reticular thalamic ဒေသများ၏အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး overinhibition တစ်ပြည်နယ်၏ electrophysiological သက်သေအထောက်အထားမကြာသေးမီ (Urbano et al, 2009) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ serotonin ဟာ reticular thalamus အတွက် GABAergic အာရုံခံအပေါ်တိုက်ရိုက် excitatory အရေးယူမှု (ပြုပြင်အဖြစ်မက်ကော်မစ်နှင့်ဝမ်, 1991), အလျှော့သောဤအရေးပါ၏လှုပ်ရှားမှုနှင့် raphe ၏ဒေသများတွင်လေ့လာတွေ့ရှိကြောင်း function အပြန်အလှန်ဆက်စပ်သောနှင့်တစ်ခုတည်းချွတ်ယွင်းဆားကစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
စုစုပေါင်းကင်းစားသုံးမှုနှင့် bCBV အကြားဆက်စပ်မှုဟာ VOIs မဆို၌တွေ့အဘယ်သူမျှမဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဆက်စပ်မှုမရှိခြင်းမူးယစ်ဆေးဝါး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှကွဲပြားခြားနားသောတစ်ဦးချင်းလွယ်ကူစွာထိခိုက်ထင်ဟပ်နိုင်, ဒါမှမဟုတ်ကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလုပျသငျ bCBV ကိုပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သောအရေအတွက်ကျော်လွန်အံ့သောငှါ၏မြင့်ငွေပမာဏနှင့်ဆက်စပ်သောနိုငျသညျ။
လူ့ပေလေ့လာမှုများ (လေ့လာသည့်လျော့နည်းသွား striatal dopaminergic Response တစ်ခု fMRI Correlate ခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ကြိုးစားမှုအတွက်Volkow et al, 1990, 1993; Martinez et al, 2004), ငါတို့သည်လည်း (က phMRI protocol ကို အသုံးပြု. DA-release စိတ်ကြွဆေးများကရူးနှမ်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုသို့ဆက်စပ်Schwarzer et al, 2004; Bifone နှင့် Gozzi, 2010) ။ အများအပြားက phMRI လေ့လာမှုများစိတ်ကြွဆေးထုတ်လုပ်သည့် striatal hemodynamic တုံ့ပြန်မှုအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ် (အဓိကအားဖြင့် dopaminergic သက်ရောက်မှုထင်ဟပ်ကြောင်းဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားပေး Knutson နှင့် Gibbs, 2007) ။ ဥပမာအားဖြင့်, စိတ်ကြွဆေး linearly Synaptic DA ပြင်းအား (ရန်ဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ကြောင်း DA-ကြွယ်ဝသော ventrostriatal ဒေသများရှိ BOLD သို့မဟုတ် rCBV တိုးထုတ်ယူနိုင်ရန်ပြသထားသည်Dixon က et al, 2005; Ren et al, 2009; Choi et al, 2006; Schwarzer et al, 2007b; Preece et al, 2007) ။ ထိုမှတပါး, စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် rCBV တုံ့ပြန်မှုကို (DA denervated ဒေသများရှိဖျက်သိမ်းနေကြChen က et al, 1997, 1999), နောက်ပိုင်းတွင်သန္ဓေသားပြီးနောက်ပွနျလညျထူထောငျသို့မဟုတ်နိုင်ပါသည်တစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုဆဲလ်အစားထိုးရပ်တ (Bjorklund et al, 2002; Chen က et al, 1999) ။ ထို့ကြောင့်ဤအချက်အလက်များ၏ပေါင်းလဒ်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် rCBV တုံ့ပြန်မှုယုံကြည်စိတ်ချရသော striatal DA neurotransmission တစ်အမှတ်အသားအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ဖော်ပြသည်။ ဒီမူဘောင်လူသားများအတွက်ပေလေ့လာမှုများအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ရာမှအလားတူ ventrostriatal dopaminergic function ကိုတစ်ဦးလျှော့ Response ဆီသို့ကင်းလုပ် SA အုပ်စုသည်ရမှတ် (အတွင်းစိတ်ကြွဆေးတစ်ခု attenuation striatal rCBV တုံ့ပြန်မှု၏ရှေ့မှောက်တွင်အတွင်းမှာပဲNarendran နှင့် Martinez, 2008) ။ ဤတွေ့ရှိချက်သည်ကိုကာကိုလာစွဲမှု၏အများဆုံးပုံတူကူးယူထားသည့်ဆေးဝါးစွဲခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကြိုတင်လက်တွေ့မကျသော neuroimaging ဆက်နွယ်မှုကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်ဆေးကုသမှုကြာရှည်စွာထုတ်ယူနေစဉ်ကာလအတွင်း 'hypohedonia' နှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲစွဲသူများအားအဓိကပါဝင်မှုရှိသည်ဟုယုံကြည်ရသည် (Volkow et al, 1997) ။ ဤရလဒ်သည် DA systems တွင်ကိုကင်းမှဖြစ်ပေါ်သောလက်တွေ့နှင့်ကြိုတင်ဆေးခန်းဆိုင်ရာ neuroadaptational ပြောင်းလဲမှုများအကြားအလားအလာရှိသောစာပေးစာယူကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ရိုးရာကိုကင်းထိတွေ့မှုပါရာဒိုင်းများမှလုံလောက်သောပုံစံမတူသည့်ရှုထောင့်၊ (ပြန်လည်သုံးသပ် Narendran နှင့် Martinez, 2008) ။ အဖြစ်အလားတူ attenuated striatal တုံ့ပြန်မှုရေတိုရေရှည် (5 ရက်) မူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ရေး protocols များ ( အသုံးပြု. ကြွက် neuroimaging လေ့လာမှုများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိကြသည်မဟုတ်Febo et al, 2005; Reese et al, 2004; နှင့် A Gozzi, အတည်မပြုရသေးသောရလဒ်များသည်), ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာကြွက်များတွင်လုပ်ပါတယ်ခံရဖို့ဒီဝိသေသအဘို့, ကင်း၏အမြင့်ဆုံးကြိမ်မှအချိန်ကြာမြင့်စွာနှင့်တိုးချဲ့သုံးစွဲနိုင်ရန်လိုအပ်သည်စေခြင်းငှါ, ထိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အရေးကြီးတာကမရှိနျဖိုးထားဏုသွေးကြောထဲမှာကိုတွေ့ရှိရပါသည်, neurocellular နှင့်ကိုကင်းထိတွေ့ဦးနှောက်၏ Interstitial အခန်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဒါကြောင့် (ဆိုလိုသည်မှာ bCBV နှင့် rCBV) ဖျော်ဖြေဦးနှောက် function ကို၏ hemodynamic အစီအမံအပေါ်ပုံမှန်မဟုတ်သော cerebrovascular ဖြစ်စဉ်များတစ်အလားအလာအလှူငွေထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့ခွင့်ပြုထားသကဲ့သို့ဤရလဒ်, အရေးကြီးပါသည်။
ကျိန်းဝပ်နှင့်စိတ်ကြွဆေး-evoked (rCBV) တုံ့ပြန်မှုအကြားဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များအတွက်သော်လည်းမကင်းအုပ်စုတစ်ခု reticular thalamic ဒေသများရှိ bCBV အကြားပြောင်းပြန်ကြားဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်တိုကျရိုကျ activation ဖော်ပြခဲ့တယ်။ ယခင်လေ့လာမှုများ (reticular thalamic လှုပ်ရှားမှု၏တားစီးနံရံပစ်ကစားနည်း-cortical dopaminergic neurotransmission မြှင့်တင်ရန်နိုင်သည်ကိုသရုပ်ပြပါပြီဂျုံးစ် et al, 1988ဤအတိုင်းဒေသကြီးများ၏ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူတသမတ်တည်း), တစ်ဦးတွေ့ရှိချက် (Paxinos, 2008) နှင့် reticular thalamic နျူကလိယ၏မြင့် GABAergic သိပ်သည်းဆ (Paxinos, 2008) ။ အဆိုပါ thalamic reticular နျူကလိယအဖြစ် prefrontal Project (အာရုံစူးစိုက်မှုယန္တယားတစ်ခုထူးခြားတဲ့ circuit ကိုဆော့ကစားZikopoulos နှင့် Barbas, 2006), ကျနော်တို့ (Basal အကြားဆက်စပ်မှု၏အရှုံးကြောင့် hypothesize နှင့်ကိုကင်းလုပ် SA အုပ်စုတွင်လေ့လာတွေ့ရှိ function ကိုကိုကင်းမှတိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိအာရုံလိုငွေပြမှုနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါ evokedBriand et al, 2008; ဂျော့ခ်ျ et al, 2007) ။ ကိုကင်းစွဲအတွက် thalamo-တိုကျရိုကျအလုပ်မဖြစ်များအတွက်တစ်ဦးက putative အခန်းကဏ္ဍ (ကျိန်းဝပ်သောအခြေအနေများအောက်တွင်ကင်းချိုးဖောက်ပြောင်းလဲ thalamo-cortical ဆက်သွယ်မှုဖေါ်ပြခြင်းမကြာသေးမီ neuroimaging လေ့လာမှုများကထောက်ခံနေသည်Gu et al, 2010) နှင့်တစ်ဦးသိမြင်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်ဖျော်ဖြေတဲ့အခါမှာ (Tomasi et al, 2007) ။ ဆက်စပ်မှုတိုင်းတာကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အသင်းအဖွဲ့ပြန်ပါလာမည်မဟုတ်ကြဘူးအဖြစ်သို့သော်နောက်ထပ်သုတေသနဒီတွေ့ရှိချက်များ၏အတိအကျသဘောသဘာဝ elucidate မှမျက်ခြေမပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။
အကျဉ်းချုပ်တှငျကြှနျုပျတို့ကြာရှည်နှင့်တိုးချဲ့-access ကိုကိုကင်းလုပ် SA ခံယူကြောင်းကြွက်များတွင်ပြောင်းလဲဦးနှောက် function ကိုအထောက်အထားပေး။ လက်တွေ့ neuroimaging တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီ, ကိုကင်း-ထိတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက် DA-release စိတ်ကြွဆေး, သိသိသာသာစုစုပေါင်းကင်းစားသုံးမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းခံခဲ့ရသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူစိန်ခေါ်မှုအပေါ်သို့ striatal ဒေသများတွင်နံရံပစ်ကစားနည်း-cortical နှင့် thalamic ဒေသများရှိလျှော့ချ Basal ဦးနှောက် function ကိုထုတ်ဖော်ပြသနှင့် attenuation Response ။ ကိုကင်း-စွဲလူနာ neuroimaging အတိုင်းအတာနှင့်အတူဤအတွေ့ရှိချက်များ၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုကိုကင်းစွဲအခြေခံသည့် neuroadaptations စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ကြွက်များတွင်ကြာရှည်နှင့်တိုးချဲ့-access ကိုလုပ် SA Paradigm ၏အသုံးပြုမှုကိုထောက်ခံပါတယ်။
ကျနော်တို့ histological ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအတွက် Histolab, Verona, အီတလီ, ကနေ phMRI အစီအမံများနှင့် Pamela Rodegher သူတို့ရဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နည်းပညာပံ့ပိုးမှုများအတွက် Valerio Crestan နှင့် Giuliano Turrini ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လူအားလုံးတို့သည်စာရေးဆရာများ GlaxoSmithKline ၏ဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာကသူတို့မူလတန်းအလုပ်ရှင်ထံမှလက်ခံရရှိဝင်ငွေ မှလွဲ. မရှိငွေကြေးထောက်ပံ့မှုသို့မဟုတ်လျော်ကြေးသုတေသနသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အတိတ်3နှစ်အတွင်းမဆိုတစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်ကော်ပိုရိတ် entity ထံမှလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးအဖြစ်ကိုရိပ်မိနိုင်ခြင်းမရှိပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ္ဍာရေးပိုင်ဆိုင်မှုရှိတယ်, ထိုကြေညာ အကျိုးစီးပွားအလားအလာပဋိပက္ခဖွဲ့စည်းရန်။
နောက်ဆက်တွဲအချက်အလက်များကို Neuropsychopharmacology က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်စက္ကူ (http://www.nature.com/npp) အတူ
Ahmed က SH ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက် validation အကျပ်အတည်း: မူးယစ်ဆေးစွဲဆီသို့ Non-disorders မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုထက်ကျော်လွန်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2010; 35: 172-184 ။ [PubMed]
အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံး 2000Diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲ (4th edn, ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော) ။ American Psychiatric Association: ဝါရှင်တန်ဒီစီ
Barroso က-Moguel R ကို, Mendez-Armenta M က, Villeda-ဟာနန်ဒက်ဇ် J ကို, Nava-Ruiz ကို C, ကြွက်မှနာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင် Santamaria အေဦးနှောက်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 26: 59-63 ။ [PubMed]
Baumann MH, Rothman RB ။ ကြွက်များတွင်ကင်းဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း serotonergic တုန့်ပြန်အတွက် ALTER: လူသားတွေအတွက်အဓိကစိတ်ကျရောဂါမှတူညီ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998; 44: 578-591 ။ [PubMed]
Bifone တစ်ဦးက, Gozzi အေ 2010Functional နှင့်ဦးနှောက် functionIn နားလည်သဘောပေါက်အတွက် pharmacological MRI: Neuropsychiatry Springer အတွက် Hagan J ကို (ed) .Molecular နှင့် Functional & Models
Bjorklund LM, et al Saínchez-Pernaute R ကို, Chung S က, Andersson T က, ချန် IYC, McNaught KS ။ သန္ဓေသားပင်မဆဲလ်တွေတစ်ပါကင်ကြွက်မော်ဒယ်အတွက်အစားထိုးပြီးနောက်အလုပ်လုပ်တဲ့ dopaminergic အာရုံခံသို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2002; 99: 2344-2349 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Briand LA က, Flagel SB, Garcia က-Fuster et al MJ, Watson ဟာ SJ, Akil H ကို, Sarter M က။ သိမြင်မှု function ကိုနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းရန်, တိုးချဲ့, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မရ access ကိုအောက်ပါ prefrontal dopamine D2 receptors အတွက် persistent ပွောငျးလဲ။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33: 2969-2980 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Chen က YC, et al Galpern WR, Brownell AL, Matthews က RT ကို, Bogdanov က M, Isacson အို။ pharmacologic MRI သုံးပြီး dopaminergic neurotransmitter လှုပ်ရှားမှု detection: ပေနှင့်အတူဆက်စပ်မှု, microdialysis နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာဒေတာ။ Magn ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Med ။ 1997; 38: 389-398 ။ [PubMed]
Chen က Y-CI, Brownell AL, Galpern W က, et al Isacson အို Bogdanov က M, Beal MF ။ pharmacological MRI, PET နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအကဲဖြတ်သုံးပြီး dopaminergic ဆဲလ်အရှုံးနှင့်အာရုံကြောအစားထိုး၏ detection ။ NeuroReport ။ 1999; 10: 2881-2886 ။ [PubMed]
Chen က Y-CI, Mandeville JB, ငုယင်တီဗီ, Talele တစ်ဦးက, Cavagna က F, Jenkins BG ။ superparamagnetic အသွေးသည်ရေကူးကန်အေးဂျင့်များနှင့်အတူသံ technique ကိုသုံးပြီး pharmacologically သွေးဆောင်အာရုံခံ activation ၏တိုးတက်မြေပုံ။ J ကို Magn ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging က။ 2001; 14: 517-524 ။ [PubMed]
Choi JK, Chen ကရီ, Hamel အီး, Jenkins BG ။ dopamine receptors ကကမကထပြုခဲ့ဦးနှောက် hemodynamic အပြောင်းအလဲများကို: dopamine-mediated neurovascular နားချင်းဆက်မှီအတွင်းနှောက် microvasculature ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Neuroimage ။ 2006; 30: 700-712 ။ [PubMed]
Dixon က AL, မတိုင်မီက M က, မောရစ် pm တွင်, Shah က YB, ယောသပ်သည် MH, Young က AMJ ။ စိတ်ကြွဆေးတုံ့ပြန်မှု Dopamine ရန်မော်ဂျူ pharmacological MRI သုံးပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိအဖြစ်။ Neuropharmacology ။ 2005; 48: 236-245 ။ [PubMed]
Febo M က, Segarra AC အ, Nair က G, Schmidt ကငွေကျပ်, Duong TQ, ကူးတို့ CF. နိုးကြွက်များတွင်အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI အားဖြင့်ထင်ရှားထပ်ခါတလဲလဲကင်းထိတွေ့မှုများ၏အာရုံကြောအကျိုးဆက်များ။ Neuropsychopharmacology ။ 2005; 30: 936-943 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ferrario CR, Gorny, G, Crombag HS လီ Y ကို, Kolb B, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ အာရုံကြောနှင့်ထိန်းချုပ်ကနေဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုအကူးအပြောင်းနဲ့ဆက်စပ်အပြုအမူ plasticity ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 58: 751-759 ။ [PubMed]
high-resolution Basal-ပြည်နယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ် schizophrenia အသစ် pharmacotherapies ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပဲ့ပြင်လို့ရပါတယ်ဘယ်လို Gaisler-ဆော်လမွန်, ငါ Schobel လုပ် SA, အသေးစားလုပ် SA, Rayport အက်စ်။ Schizophr Bull ။ 2009; 35: 1037-1044 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gawin FH, Ellinwood Eh ။ ကိုကင်းနှင့်အခြားစိတ်ကြွဆေး။ N ကို Engl J ကို Med ။ 1988; 318: 1173-1182 ။ [PubMed]
ဂျော့ခ်ျအို Mandyam CD ကို, Wee က S, Koob gf ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှတိုးချဲ့ access ကိုကြာရှည် prefrontal Cortex-မှီခိုအလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းထုတ်လုပ်သည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2007; 33: 2474-2482 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
စတိန်း RZ, Woicik PA ဆိုပြီး, Maloney T က, Tomasi: D, Alia-Klein N ကို, ရှမ်း J ကို, et al ။ ခံတွင်း methylphenidate တစ်ဦးအဓိကသိမြင်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်စဉ်အတွင်းကင်းစွဲအတွက် cingulate လှုပ်ရှားမှုပုံမှန်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2010; 107: 16667-16672 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gonzalez RG, Fischman AJ, Guimaraes AR, Carr က, CA, Stern ပာအီး, Halpern EF, et al ။ စိတ်ဖောက်ပြန်၏အကဲဖြတ်အတွက် functional MR: fludeoxyglucose က F 18 နှင့်အတူ positron ထုတ်လွှတ် tomography အပေါ်နှောက်ဇီဝြဖစ်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူပုံမှန်မဟုတ်သောပြောင်းလဲနေသောနှောက်အသှေးကိုအသံအတိုးအကျယ်ကိုတိုင်းတာ၏ဆက်စပ်မှု။ AJNR Am J ကို Neuroradiol ။ 1995; 16: 1763-1770 ။ [PubMed]
Gozzi တစ်ဦးက, Ceolin L ကို, Schwarz တစ်ဦးက, Reese T က, Bertani S က, Bifone အေ phMRI အတွက်နှောက် haemodynamics နှင့် autoregulation တစ် multimode စုံစမ်းစစ်ဆေး။ Magn ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging က။ 2007; 25: 826-833 ။ [PubMed]
Gozzi တစ်ဦးက, Crestan V ကို, Turrini, G, Clemens M က, Bifone အေဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း serotonin 5HT2a receptors မှာနံရံပစ်ကစားနည်း-hippocampal ဆားကစ်၏အလုပ်လုပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှု modulates ။ Psychopharmacology ။ 2010; 209: 37-50 ။ [PubMed]
Gozzi တစ်ဦးက, အကြီးစားကို C, Schwarz တစ်ဦးက, Bertani S က, Crestan V ကို, phencyclidine ဖို့ phMRI တုံ့ပြန်မှုအပေါ် antipsychotic နှင့် glutamatergic အေးဂျင့်များ၏ Bifone အေ Differential ဆိုးကျိုးများ။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33: 1690-1703 ။ [PubMed]
Gozzi တစ်ဦးက, et al Massagrande M က, Amantini: D, Antolini M က, Martinelli က: P, Cesari N ကို။ functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် orexin-1 နှင့် orexin-2 အဲဒီ receptor ရန်များ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအာရုံကြောအလွှာဖော်ပြသည်။ PLoS ONE ။ 2011; 6: e16406 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gu H ကို, Salmeron BJ, ရော့စ်တီဂျေ, Geng က X, Zhan W က, Stein EA ၏, et al ။ ငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုများကသရုပ်ပြအဖြစ် Mesocorticolimbic ဆားကစ်နာတာရှည်ကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ချို့ယွင်းလျက်ရှိသည်။ Neuroimage ။ 2010; 53: 593-601 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Harris က, G, Aston-ဂျုံးစ် G. အ Beta ကို-adrenergic ရန်ကိုကင်းနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်-မှီခိုကြွက်များတွင်ငွေထုတ်စိုးရိမ်စိတ် attenuate ။ Psychopharmacology ။ 1993; 113: 131-136 ။ [PubMed]
ဟောင်ကောင် LE, Hodgkinson, CA, ယန် Y ကို, Sampath H ကို, ရော့စ်တီဂျေ, Buchholz B, et al ။ တစ်ဦးကမျိုးရိုးဗီဇ modulated, အခ်ါ cingulate circuit ကိုလူ့နီကိုတင်းစွဲလမ်းထောက်ခံပါတယ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2010; 107: 13509-13514 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Huettel S က, သီချင်း AW, ဆက်မက်ကာသီ G. အ Functional Magnetic ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging က။ Sinauer: ဆန်းဒါးလန်း; 2004 ။
Hyder က F, Kida, ငါ Behar KL, Kennan RP, Maciejewski PK, Rothman DL ။ ဦးနှောက်၏ quantitative အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်: BOLD fMRI နေဖြင့်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုပုံဖော်ဆီသို့ဦးတည်။ NMR Biomed ။ 2001; 14: 413-431 ။ [PubMed]
ဂျုံးစ်မဂ္ဂါဝပ်, Kilpatrick IC, Phillipson ညီလေး။ ကြွက်များ၏ prefrontal cortex အတွက် Dopamine function ကို thalamic mediodorsal နျူကလိယအတွက်လုပ်သူများဂါဘမြို့သား-mediated တားစီးတစ်လျှော့ချရေးမှအထိခိုက်မခံဖြစ်ပါတယ်။ Exp ဦးနှောက် Res ။ 1988; 69: 623-634 ။ [PubMed]
Kalivas PW ။ ကိုကင်းစွဲထဲမှာအချိုမှုစနစ်များကို။ Curr Opin Pharmacol ။ 2004; 4: 23-29 ။ [PubMed]
Kalivas PW, Volkow N ကို, စွဲလမ်းအတွက် Seaman ဂျေစီမံထားခြင်းမရှိသောလှုံ့ဆော်မှု: prefrontal-accumbens အချိုမှုဂီယာအတွက်ရောဂါဗေဒ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 45: 647-650 ။ [PubMed]
Knutson B, Gibbs အက်စ်လင့်ခ်ချိတ်ခြင်းနျူကလိယ dopamine နှင့်သွေးအောက်ဆီဂျင် accumbens ။ Psychopharmacology ။ 2007; 191: 813-822 ။ [PubMed]
Koob gf, Sanna PP, Bloom FE ။ စွဲလမ်း၏ neuroscience ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1998; 21: 467-476 ။ [PubMed]
လန်ဒန် ED, Bonson KR, Ernst M က, ကင်းအလွဲသုံးစားမှု Grant ကအက်စ်ဦးနှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ: ဆေးဝါးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Crit ဗြာ Neurobiol ။ 1999; 13: 227-242 ။ [PubMed]
lu, L, Grimm JW, မျှော်လင့်ခြင်း BT, ကိုကင်းတဏှာ၏ Shaham Y. ပေါက်ဖွားဆုတ်ခွာပြီးနောက်: preclinical အချက်အလက်များ၏သုံးသပ်ချက်။ Neuropharmacology ။ 2004; 47: 214-226 ။ [PubMed]
Malin DH, မွန်း WD, Moy ET, Jennings RE, Moy DM, Warner RL, et al ။ ကိုကင်း abstinence syndrome ရောဂါ၏တစ်ဦးကကြွက်မော်ဒယ်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2000; 66: 323-328 ။ [PubMed]
Mandeville JB, Marota JJA, Kosofsky BE, Keltner JR, et al Weissleder R ကို, ရို B က။ ကြွက် forepaw ဆွကာလအတွင်းဆွေမျိုးနှောက်အသှေးကိုအသံအတိုးအကျယ်၏ dynamic အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်။ Magn ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Med ။ 1998; 39: 615-624 ။ [PubMed]
Markou တစ်ဦးက, Koob gf ။ Bromocriptine ကင်းဆုတ်ခွာတဲ့ကြွက်မော်ဒယ်အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာ intracranial Self-stimulation တံခါးခုံအတွင်းမြင့်နောက်ကြောင်းပြန်။ Neuropsychopharmacology ။ 1992; 7: 213-224 ။ [PubMed]
Martinez: D, Broft တစ်ဦးက, Foltin RW, Slifstein M က, Hwang DR, Huang က Y ကို, et al ။ ကိုကင်းမှီခိုနှင့် striatum ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ subdivisions အတွက် D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု: ကင်း-ရှာအပြုအမူနှင့်အတူဆက်ဆံရေးမျိုး။ Neuropsychopharmacology ။ 2004; 29: 1190-1202 ။ [PubMed]
Martinez: D, ဂရင်း K ကို Broft တစ်ဦးက, Kumar က D:, လျူက F, Narendran R ကို, et al ။ ကိုကင်းမှီခိုနှင့်အတူလူနာအတွက် endogenous dopamine ၏အနိမ့်အဆင့်ကို: စူးရှ dopamine လျော့ကျအောက်ပါ D2 / D3 receptors ၏ပေပုံရိပ်ကနေတွေ့ရှိချက်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009; 166: 1170-1177 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
မက်ကော်မစ် DA, ဝမ် Z. serotonin နဲ့ noradrenaline အဆိုပါ guinea-ဝက်နှင့်ကြောင်နျူကလိယ၏ GABAergic အာရုံခံ thalami reticularis excite ။ J ကို Physiol ။ 1991; 442: 235-255 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Micheli က F, Bonanomi, G, Blaney FE, Braggio S က, Capelli လေး, Checchia တစ်ဦး။ 1,2,4-triazol-3-yl-thiopropyl-tetrahydrobenzazepines: အစွမ်းထက်နှင့်ရွေးချယ် dopamine: D (3) အဲဒီ receptor ရန်တစ်စီးရီး။ J ကို Med Chem ။ 2007; 50: 5076-5089 ။ [PubMed]
et al Moretti က M, Mugnaini M က, Tessari M က, Zoli M က, Gaimarri တစ်ဦးက, Manfredi ငါ။ ဦးနှောက်အာရုံကြောဆဲလ်နီကိုတင်းအဲဒီ receptor Subtype ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအပျေါနီကိုတင်း၏သွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသို့မဟုတ်အရေပြားအောက်ဆုံး minipump ပြုတ်ရည်၏သက်ရောက်မှုတစ်ခုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု။ Mol Pharmacol ။ 2010; 78: 287-296 ။ [PubMed]
Mutschler နယူးဟမ်းရှား, Miczek Ka ။ တစ်ဦးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သို့မဟုတ် Non-ဆက်ပြောပါတယ်ကင်းမူးရူးကနေဆုတ်ခွာ: ကြွက်များတွင် ultrasonic ဒုက္ခဆင်းရဲအသံအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု။ Psychopharmacology ။ 1998; 136: 402-408 ။ [PubMed]
Narendran R ကို, striatal dopamine ဂီယာ၏ Martinez ဃကင်းအလွဲသုံးစားမှုအရေးကြီးတဲ့: အ preclinical နှင့်လက်တွေ့ပုံရိပ်စာပေ၏အရေးပါသောပြန်လည်သုံးသပ်။ synapses ။ 2008; 62: 851-869 ။ [PubMed]
Parsons LH, Koob gf, သွေးကြောသွင်းကင်းရန်န့်အသတ် access ကိုအပြီးဆုတ်ခွာစဉ်ကကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက် Weiss အက်ဖ် serotonin ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1995; 274: 1182-1191 ။ [PubMed]
Paxinos G. အ 2008The Rat အာရုံကြောစနစ် Elsevier: လန်ဒန်; 1193pp ။
လူမျိုး ll, Kravitz AV စနစ်, Guillem K. ကိုကင်းစွဲအတွက် accumbal hypoactivity ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ScientificWorldJournal ။ 2007; 7: 22-45 ။ [PubMed]
Porrino LJ, Smith က HR, Nader, MA, Beveridge TJR ။ ကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှု: စွဲ၏သင်တန်းကျော်တစ်ဦးပြောင်းလဲပစ်မှတ်။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 31: 1593-1600 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Preece MA, Sibson ရော်ဘာ, Raley JM, ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ BOLD fMRI signal ကိုအတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများအပေါ်တစ်ဦး tyrosine-အခမဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်အရောအနှောများ Blamire တစ်ဦးက, Styles P ကို, Sharp ကတီတိုင်းဒေသကြီး-တိကျတဲ့ဆိုးကျိုးများ။ synapses ။ 2007; 61: 925-932 ။ [PubMed]
Reese T က, Schwarz AJ, Gozzi တစ်ဦးက, Crestan V ကို, Bertani S က, Heidbreder CA. ဒွါဒသမ ISMRM သိပ္ပံအစည်းအဝေးနှင့်ပြပွဲ၏တရားစွဲဆိုမှု။ ISMRM စာနယ်ဇင်း: ကျိုတို; 2004 ။ functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်မူးယစ်ဆေး-နုံနဲ့စိတ်ကြွဆေး-sensitized ကြွက်အကြား spatio-ယာယီကွဲပြားခြားနားမှုကို detect; စ။ 228 စစ။
Ren J ကို, Xu H ကို, Choi JK, Jenkins BG, Chen ကရီ။ လေးစိတ်ကြွဆေးဆေးများအားဖြင့်ရူးနှမ်းအဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသော dopamine အာရုံစူးစိုက်မှုမှ Dopaminergic တုံ့ပြန်မှု။ synapses ။ 2009; 63: 764-772 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရောဘတ် DCS, မော်ဂန်: D, လျူ Y. ကိုကင်းစွဲနေတဲ့ကြွက်ကိုလုပ်လုပ်နည်း။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 31: 1614-1624 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Scholtz CL ။ Luxol မြန်အပြာရောင် MBS သုံးပြီး myelin ၏ quantitative histochemistry ။ Histochem ဂျေ 1977; 9: 759-765 ။ [PubMed]
Schwarz တစ်ဦးက, Gozzi တစ်ဦးက, Reese T က, Bertani S က, Crestan V ကို, Hagan J ကို, et al ။ ရွေးချယ် dopamine: D (3) အဲဒီ receptor ရန် SB-277011-တစ်ဦးကကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာစူးရှစိတ်ကြွဆေးစိန်ခေါ်မှုမှ phMRI တုံ့ပြန်မှု potentiates ။ synapses ။ 2004; 54: 1-10 ။ [PubMed]
Schwarz AJ, Danckaert တစ်ဦးက, Reese T က, Gozzi တစ်ဦးက, Paxinos, G, Watson ကို C, et al ။ pharmacological MRI ဖို့လျှောက်လွှာ: တစ်ဦးက stereotaxic MRI template ကိုတစ်ရှူးလူတန်းစားဖြန့်ဖြူးမြေပုံများနှင့် Co-မှတ်ပုံတင်ခန္ဓာဗေဒ Atlas အတူကြွက်ဦးနှောက်သတ်မှတ်ထားသည်။ Neuroimage ။ 2006a; 32: 538-550 ။ [PubMed]
Schwarz AJ, Gozzi တစ်ဦးက, Reese T က, အ pharmacologically activated ဦးနှောက်ထဲမှာ Bifone အေ Functional ဆက်သွယ်မှု: D-စိတ်ကြွဆေးမှဆက်စပ်တုံ့ပြန်မှုများကွန်ရက်များဖြေရှင်း။ Magn ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Med ။ 2007a; 57: 704-713 ။ [PubMed]
Schwarz AJ, Gozzi တစ်ဦးက, Reese T က, pharmacological MRI သုံးပြီး neurotransmitter စနစ်များအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှု၏ Vivo မြေပုံခုနှစ်တွင် Bifone အေ။ Neuroimage ။ 2007b; 34: 1627-1636 ။ [PubMed]
Schwarz AJ, Reese T က, Gozzi တစ်ဦးက, Bifone အေ Functional MRI intravascular ဆနျ့ကငျြဘအေးဂျင့်ကိုအသုံးပြုပြီး: အဆွေမျိုး cerebrovascular (rCBV) အချိန်သင်တန်း detrending ။ Magn ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging က။ 2003; 21: 1191-1200 ။ [PubMed]
Schwarz AJ, Whitcher B, Gozzi တစ်ဦးက, Reese T က, pharmacological MRI အတွက် Bifone အေလေ့လာမှု-Level wavelet စပျစ်သီးပြွတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အချက်အလက်မောင်းနှင် signal ကိုမော်ဒယ်များ။ J ကို neuroscience နည်းလမ်းများ။ 2006b; 159: 346-360 ။ [PubMed]
Sharp ကလေး, la Regina MC ။ 1998The ဓာတ်ခွဲခန်း Rat စီအာစီစာနယ်ဇင်း: ဘာလင်; 240 စစ။
အသေးစားလုပ် SA, Chawla MK, Buonocore M က, Rapp PR စနစ်, Barnes CA. imaging မျောက်နှင့်ကြွက်များတွင်ဦးနှောက် function ကို၏ဆက်နွယ်နေပါသည်အိုမင်းမှ differential အားနည်းချက်တစ်ခု hippocampal မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းအထီးကျန်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2004; 101: 7181-7186 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Smith က SM, Jenkinson M က, Woolrich မဂ္ဂါဝပ်, Beckmann CF, ဘီရန်း TE, Johansen-Berg က H ကို, et al ။ FSL အဖြစ်အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ MR image ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အကောင်အထည်ဖော်တိုးတက်လာ။ Neuroimage ။ 2004; 23 (ပျော့ပျောင်း 1: S208-S219 [။PubMed]
Strickland TL, Mena ငါ et al Villanueva-Meyer J ကို, Miller က BL, Cummings က J ကို, Mehringer CM ။ ဦးနှောက် perfusion နှင့်နာတာရှည်ကိုကင်းသုံးစွဲမှု neuropsychological အကျိုးဆက်များ။ J ကို Neuropsychiatry Clin neuroscience ။ 1993; 5: 419-427 ။ [PubMed]
Tomasi: D, စတိန်း RZ, Telang က F, Maloney T က, Alia-Klein N ကို, Caparelli EC, et al ။ ကိုကင်းချိုးဖောက် Thalamo-cortical ကမောက်ကမဖြစ်မှု: အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အမြင်အတွက်ဂယက်ရိုက်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2007; 155: 189-201 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Tomasi: D, Volkow ND, et al ဝမ် R ကို, Carrillo JH, Maloney T က, Alia-Klein N ကို။ ကိုကင်းချိုးဖောက် dopaminergic midbrain နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်။ PLoS ONE ။ 2010; 5: e10815 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Tumeh အက်စ်အက်စ်, Nagel JS, အင်္ဂလိပ် RJ, Moore က M ကို, Holman BL ။ ကိုကင်းချိုးဖောက်မှုများဦးနှောက်မူမမှန်: SPECT perfusion ဦးနှောက် scintigraphy ခြင်းဖြင့်သရုပ်ပြ။ တိုးတက်မှုအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဒီယိုရောင်ခြည်ကုသမှုပညာ။ 1990; 176: 821-824 ။ [PubMed]
Urbano FJ, Bisagno Vn, Wikinski SI, Uchitel OD, Llin RR ။ ကိုကင်းအလွန်အကျွံအုပ်ချုပ်မှုသည်ကြွက်များတွင် thalamocortical အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009; 66: 769-776 ။ [PubMed]
Vanderschuren LJMJ, Everitt BJ ။ မူးယစ်ဆေးရှာအချိန်ကြာမြင့်စွာကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောဖြစ်လာသည်။ သိပ္ပံ။ 2004; 305: 1017-1019 ။ [PubMed]
Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ, Swanson JM, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းအတွက် Telang အက်ဖ် Dopamine: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများနှင့်ကုသမှုဂယက်၏ရလဒ်များကို။ Arch Neurol ။ 2007; 64: 1575-1579 ။ [PubMed]
et al Volkow ND, Hitzemann RJ, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Wolf ကအေပီ, Dewey SL ။ ကိုကင်းချိုးဖောက်ရေရှည်တိုကျရိုကျဦးနှောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်အပြောင်းအလဲများကို။ synapses ။ 1992; 12: 86 ။ [PubMed]
Volkow ND, Mullani N ကို, သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင် KL, Adler က S, နာတာရှည်ကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက် Krajewski K. နှောက်သွေးစီးဆင်းမှု: positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့်အတူလေ့လာမှုတစ်ခု။ br J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1988; 152: 641-648 ။ [PubMed]
Volkow ND, et al ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Hitzemann R ကို, Gatley SJ, Dewey အက်စ်အက်စ်။ တက်ကြွကင်း-အလွဲသုံးစားလုပ်ဘာသာရပ်များအတွက် benzodiazepines မှ Enhanced sensitivity ကို: တစ်ပေလေ့လာမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998; 155: 200-206 ။ [PubMed]
Volkow ND, et al ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Logan J ကို, Gatley SJ, Hitzemann R ကို။ detoxified ကင်း-မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက် striatal dopaminergic တုန့်ပြန်လျော့သွားသည်။ သဘာဝ။ 1997; 386: 830-833 ။ [PubMed]
Wee က S, Specio SE, Koob gf ။ ကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်ထိုးခြင်းနှင့် session တစ်ခုကြာချိန်၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2007; 320: 1134-1143 ။ [PubMed]
Wilson က JM, ကိရှ SJ ။ အဆိုပါ dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ဆနျ့ကငျြဘအတွက် vesicular monoamine ပို့ဆောင်ရေး,, ကြွက်များတွင်နာတာရှည်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ပြောင်းလဲပေးမထားပါ။ J ကို neuroscience ။ 1996; 16: 3507-3510 ။ [PubMed]
Wilson က JM, Nobrega ဖြစ်မှု, ကာရိုး ME, Niznik HB, Shannak K ကိုလက်ခ် ST, et al ။ 3H-WIN 35,428 နှင့် 3H-GBR 12,935 ၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောငျဒသေစည်းနှောင်ပုံစံများ differential နာတာရှည်ကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ J ကို neuroscience ။ 1994; 14: 2966-2979 ။ [PubMed]
Worsley KJ, အီဗန်, AC, Marrett S က, Neelin P. လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ CBF activation လေ့လာမှုများအဘို့တစ်ဦးကသုံးရှုထောင်စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ J ကို Cereb သွေးစီးဆင်းမှု Metab ။ 1992; 12: 900-918 ။ [PubMed]
Zaharchuk, G, Mandeville JB, Bogdanov AA ကို, Jr က Weissleder R ကို, ရို BR, Marota JJ ။ autoregulation နှင့် hypoperfusion ၏ Cerebrovascular ဒိုင်းနမစ်။ CBF နှင့် hemorrhagic hypotension စဉ်အတွင်းစုစုပေါင်းနှင့် microvascular နှောက်အသှေးကို volume ထဲမှာပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ဦး MRI လေ့လာမှု။ လေဖြတ်ခြင်း။ 1999; 30: 2197-2204 ။ [PubMed]
Zikopoulos B က, အ thalamic reticular နျူကလိယမှ Barbas အိပ်ချ် Prefrontal စီမံချက်များအာရုံစူးစိုက်မှုယန္တယားတစ်ခုထူးခြားတဲ့ circuit ကိုဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 7348-7361 ။ [PubMed]